Juventus Oo Guul Soo Laabasho Leh Ka Gaadhay Brescia Xilli Uu Cristiano Ronaldo Ka Maqnaa -News and information about Somalia
Home Sports Juventus Oo Guul Soo Laabasho Leh Ka Gaadhay Brescia Xilli Uu Cristiano...
Kooxda Juventus ayaa guul dirqi ah oo soo laabasho leh ka gaadhay kooxda ku cusub horyaalka Serie A-da xilli ciyaareedkan ee Brescia kulan uu ka maqnaa xiddigooda ugu muhiimsan ee Cristiano Ronaldo.
Kooxda Brescia oo uu kulankii ugu horeeyay u saftay xiddigooda Mario Balotelli ayaa si dar-dar leh ku bilowday ciyaarta iyaga oo gool wakhti hore ah ka dhaliyay Juventus.
Daqiiqadii 4-aad ayay kooxda Brescia dhalisay goolka 1-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga weerarka uga ciyaara ee Alfredo Donnarumma kaas oo ciyaarta ka dhigay 1/0.
Kooxda Juventus ayaa la wareegtay hogaanka ciyaarta iyaga oo wax walba soo bandhigay si u keenaan goolka bar-baraha uguna soo laabtaan ciyaarta.
Daqiiqadii 40-aad ayay Juventu heshay goolka 1-aad ee ciyaarta laakiin waxa uu ahaa gool uu si khaldan isaga dhaliyay xiddiga Brescia ee Jhon Chancellor kaas oo ciyaarta ka dhigay 1/1.
Waxa sidaas ku dhamaatay qaybii hore ee ciyaarta oo ay labada kooxood ku kala bexeen bar-baro 1/1 ah kooxda Juventus-na ahayd kooxda fiican.
Qaybtii dambe ayayna wax badan dhicin marka laga reebo goolkii ay kooxda Juventus dhalisay iyo fursado badan oo ay kooxda Juventus samaysay.
Daqiiqadii 63-aad ayay Juventus dhalisay goolka 2-aad ee ciyaarta iyada oo uu u dhaliyay xiddiga Miralem Pjanic kaas oo hogaanka u dhiibay ciyaarta.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ay Juventus ku gaadhay guul soo laabasho leh xilli uu ka maqnaa Gooldhaliyohooda Cristiano Ronaldo oo dhaawac ku seegay kulanka.
Previous articleHordhac: Real Madrid Vs Osasuna: Los Blancos Oo Rikoodh Fiican Ku leh Osasuna
Next articleXOG: DFS oo ku dhacday Dabin ay dhigeen Midowga Afrika & Masar, Kenyana dan ugu jirto.
Man United Oo Taako Kala Kulantay 10 Xiddig Oo Southampton Ah...